တပ်မတော် နဲ့ ရွေးကော် – Ye Htut's Blog
Posted byye htut December 24, 2020 December 24, 2020 Posted inElection, PoliticsTags:UEC, yehtutarticle
တပ်မတော်သတင်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့က ဒီဇင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှာ တပ်မတော်သားတွေ ဆန္ဒမဲပေးခဲ့ရတဲ့ မဲဆန္ဒနယ် လေးခုရဲ့ မဲစာရင်း မှားယွင်းမှုတွေကို ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့ တယ်။ ( ပုံ ၁ ) ။ စာရင်းအသေးစိတ်ကို အောက်ပါလင့်ခ်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်။
တပ်မတော်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ မဲစာရင်းမှားယွင်းမှုတွေကို
၁။ တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ မဲပေးခွင့်ရစေနိုင်သည့် ထပ်နေသော မဲစာရင်း
၂။ မဲ မသမာမှုဖြစ်နိုင်သည့် မဲစာရင်း
တစ်ကြိမ်ထက်ပို၍ မဲပေးခွင့်ရစေနိုင်သည့် ထပ်နေသော မဲစာရင်းဆိုတာက နိုင်ငံသားကတ်၊ အမည်၊ အသက်၊ မိဘ အားလုံးတူနေတာကနေ နိုင်ငံသားကတ်တူ ပြီး ကျန်တဲ့အချက်တစ်ခု မဟုတ်တစ်ခုပဲ လွဲနေတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်အရေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
မဲ မသမာမှုဖြစ်နိုင်သည့် စာရင်း ဆိုတာက ၁၈ နှစ်မပြည့်ပဲ မဲစာရင်းထဲပါနေတဲ့သူများ၊ နိုင်ငံသား ကတ်မရသေးပဲ နဲ့ မဲစာရင်းမှာပါဝင်နေသူများ ( အိမ်ထောင်စုစာရင်းနဲ့တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေးဖို့ ၊ နိုင်ငံသား ဖြစ်/မဖြစ် စစ်ဆေးဖို့ လိုအပ်သူ) နဲ့ အသက်တစ်ရာကျော် မဲဆန္ဒရှင် အရေ အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ လက်သန်းကို မှင်တို့ရတဲ့အတွက် နှစ်ကြိမ်ထပ်ပြီး မဲပေးလို့မရဘူးလို့ ဆင်ခြေ ပေး ကောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် (ကျွန်တော့်မဲပေးခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံအရ) အသက် ခြောက်ဆယ်အထက် ကြိုတင်မဲပေးခဲ့ရသူတွေက လက်သန်းမှင်တို့မခံရဘူး။ နောက်တစ်ခါ မဲဆန္ဒနယ်မြေကို ရောက်တာ ရက်ကိုးဆယ်လည်းမပြည့်သေး၊ ကိုဗစ်ကြောင့် နေရပ်လည်း မပြန် နိုင်၊ နေရပ်မှာလည်း ကြိုတင်မဲပေးဖို့ အချိန်မမီတော့တဲ့ သူတွေကလည်း လက်သန်း မှင်တို့မခံ ထားရဘူး။ ဒါဟာ မှတ်ပုံတင်ကို မစစ်ဘဲ မဲဖိတ်စာကတ်ပြားပြပြီး မဲပေးခွင့်ပြုလိုက်ရင် နှစ်ကြိမ် မဲပေးလို့ရနိုင်တဲ့ ဟာကွက်တစ်ခုဖြစ်နေတယ်။
တပ်မတော်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်ပါ စာရင်းတွေကို ကြည့်လိုက်တဲ့အခါ မဲစာရင်းမှားယွင်းမှု ရာခိုင်နှုန်း အတော်မြင့်မားတာကို တွေ့ရတယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး အရေးကြီးတာက ရမည်းသင်း၊ ပျော်ဘွယ် နဲ့တနိုင်းမဲဆန္ဒနယ်မြေတွေက မဲစာရင်းမှားယွင်းမှု တွေဟာ အဲဒီမဲဆန္ဒနယ်ရဲ့ ရွေးကောက်ပွဲ အရှုံး၊အနိုင်ကို အပြောင်းအလဲဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အခြေအနေ မှာ ရှိနေတာကို တွေ့ရတဲ့ အချက် ဖြစ်ပါတယ်။
ရမည်းသင်းမဲဆန္ဒနယ် ( ပြည်သူ့လွှတ်တော်)
နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များအရ ရမည်းသင်းမဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရာမှာ ဒီချုပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက ထောက်ခံမဲ ၅၀. ၇၉ % ၊ ၇၈၃၇၄ မဲ ရတယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းက ၄၆. ၅၂ % ၊ ၇၁၇၉၁ မဲ ရတယ်။ မဲကွာခြားချက်က ၆၅၈၃ မဲ ပဲရှိတယ်။ ( ပုံ ၂ )
တပ်မတော်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ရမည်းသင်းမဲဆန္ဒနယ်မှာ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးမဲပေးခွင့်ရနိုင်တဲ့ ထပ်နေတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်အရေအတွက် နဲ့ နိုင်ငံသားကတ်မရှိသူ/ ၁၈ နှစ်မပြည့်သူ မဲဆန္ဒရှင်/ အသက်တစ်ရာကျော် အရေ အတွက်ပေါင်းလိုက်ရင် ၁၈၀၉ ၁ မဲရှိတယ်။
ဒါဟာ ပါတီနှစ်ခုကြား မဲကွာခြားချက်ထက်များနေ တယ်။ ( ပုံ ၃ )
ပျော်ဘွယ်မဲဆန္ဒနယ် ( ပြည်သူ့လွှတ်တော်)
နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များအရ ပျော်ဘွယ် မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရာမှာ ဒီချုပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက ထောက်ခံမဲ ၅၆.၆၁ % ၊ ၉ ၈၇၅၅ မဲ ရတယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းက ၄၂.၅၇ % ၊ ၇၄၂၇၈ မဲ ရတယ်။ မဲကွာခြားချက်က ၂၄၄၇၇ မဲ ပဲရှိတယ်။ ( ပုံ ၄ )
တပ်မတော်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ ပျော်ဘွယ် မဲဆန္ဒနယ် မှာ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးမဲပေးခွင့်ရနိုင်တဲ့ ထပ်နေတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်အရေအတွက် နဲ့ နိုင်ငံသားကတ်မရှိသူ/ ၁၈ နှစ်မပြည့်သူ မဲဆန္ဒရှင်/ အသက်တစ်ရာကျော် အရေ အတွက်ပေါင်းလိုက်ရင် ၄၃၈၆၀ မဲရှိတယ်။
ဒါဟာ ပါတီနှစ်ခုကြား မဲကွာခြားချက်ထက်များနေ တယ်။ ( ပုံ ၅ )
တနိုင်း မဲဆန္ဒနယ် ( ပြည်သူ့လွှတ်တော်)
နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေမှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်များအရ တနိုင်း မဲဆန္ဒနယ် ပြည်သူ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်ရာမှာ ဒီချုပ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းက ထောက်ခံမဲ ၃၈. ၇၉ % ၊ ၈၄၈၉ မဲ ရတယ်။ ပြည်ခိုင်ဖြိုးကိုယ်စားလှယ်လောင်းက ၃၄.၇၈ % ၊ ၇၆၁၃ မဲ ရတယ်။ မဲကွာခြားချက်က ၈၇၆ မဲ ပဲရှိတယ်။ ( ပုံ ၆ )
တပ်မတော်ရဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်အရ တနိုင်းမဲဆန္ဒနယ်မှာ တစ်ကြိမ်ထက်ပိုပြီးမဲပေးခွင့်ရနိုင်တဲ့ ထပ်နေတဲ့ မဲဆန္ဒရှင်အရေအတွက် နဲ့ နိုင်ငံသားကတ်မရှိသူ/ ၁၈ နှစ်မပြည့်သူ မဲဆန္ဒရှင် အရေ အတွက်ပေါင်းလိုက်ရင် ၅၉၇၃ မဲရှိတယ်။
ဒါဟာ ပါတီနှစ်ခုကြား မဲကွာခြားချက်ထက်များနေ တယ်။ ( ပုံ ၇ နှင့် ၈ )
အထက်ပါ တွေ့ရှိချက်များအရ အဲဒီမဲဆန္ဒနယ်သုံးခုက မဲစာရင်းမှားယွင်းမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်ထောက်ပြချက်တွေကို အလေးထားသင့်တယ် ဆိုတာ ထင်ရှား ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဆောင်းပါးရေးချိန်အထိ ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဘက်က တပ်မတော် သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တုန့်ပြန်တာမရှိသေးဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ရွေးကော် အနေနဲ့ တုန့်ပြန်ရှင်းလင်းသင့်တယ်လို့ ယူဆတယ်။
ပထမအချက်က တပ်မတော်က ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၀ ( စ ) “ တပ်မတော် သည် နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် တာဝန်ရှိသည် ” ဆိုတဲ့ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အခြေခံပြီး ပြောတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပါတီတစ်ခုရဲ့ ကန့်ကွက်ချက်လို သဘောထား ဖို့ မသင့်ဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တပ်မတော်က ထောက် ပြတဲ့ စာရင်းဇယားတွေက မှန်ကန်မှု ရှိ/ မရှိ ပြန်လည်စိစစ်သင့်တယ်။ တပ်မတော်ထောက်ပြ ချက် မှားနေတယ်ဆိုရင်လည်း ပြန်လည် ဖြေရှင်းသင့်တယ်။
ဒုတိယအချက်က မဲစာရင်း မှားယွင်း နိုင်တယ်လို့ ထောက်ပြထားတဲ့ မဲဆန္ဒရှင် အရေအတွက်က မဲအများ ဆုံး ရတဲ့ ပါတီနဲ့ ဒုတိယ အများဆုံးရတဲ့ပါတီနှစ်ခုကြား မဲကွာခြားချက်ထက် များနေတဲ့ အခြေအနေဟာ ဒီချုပ် နဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး ကြားမှာတင်မဟုတ်ဘူး။ ဒီချုပ် နဲ့ တိုင်းရင်းသား ပါတီ တွေကြားမှာ လည်းရှိနိုင်တယ်။ ရွေးကော်က မဲဆန္ဒရှင်တွေ သံသယကင်းအောင် မဖြေရှင်းပေး ဘူးဆိုရင် ရွေးကောက်ပွဲလွန်ကာလ အမျိုးသား ပြန်လည်စည်းလုံးညီညွတ်ရေးကို ထိခိုက် နိုင် တယ်။
တတိယအချက်ကတော့ ဦးလှသိန်းကော်မရှင်ဟာ ဦးတင်အေးကော်မရှင် နဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာအရ၊ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုအရ နှိုင်းယှဉ်ခံနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ ဦးတင်အေး ကော်မရှင်တာဝန်ယူကျင်းပ တဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲမှာလည်း ဒီချုပ်ပဲနိုင်ခဲ့တာပါပဲ။ ဒါပေမယ် နိုင်သူလည်းပျော်နိုင်တယ် ၊ ရှုံးသူတွေလည်း ပြုံး နိုင်တယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဦးလှသိန်းကော်မရှင်အနေနဲ့ မိမိဂုဏ်သိက္ခာနဲ့ စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကို ကာကွယ် ဖို့လိုပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဂုဏ်သိက္ခာကို ကာကွယ်တယ်ဆိုတာကတော့ ကျင့်ဝတ်အရပြောတာပါ။ ဖွဲ့စည်းပုံ ဥပဒေအရ ကော်မရှင်လုပ်ခဲ့သမ ျှ အတည်ပဲ ဆိုတဲ့အချက်ကို ကိုင်ပြီး တေမိ လုပ်နေရင်လည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနာဂတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ မဲစာရင်းအမှား တွေအကြောင်းဆွေးနွေး တဲ့ အခါတိုင်း ဦးလှသိန်း ကော်မရှင်လက်ထက်ကပေါ့ ဆိုပြီး ရည်ညွှန်းမခံရဖို့တော့လိုတာပေါ့။
အခြားသူများရဲ့ ကန့်ကွက်ချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေ ပုဒ်မ ၈၇ က ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ အဆင့်ဆင့်နဲ့ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များ ကို တရားစွဲမခံရဖို့ အကာအကွယ် ပေးထားတယ်လို့ ပြောရင်လည်း ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပုဒ်မ ၈၇ အစမှာ “ ဥပဒေနဲ့ အညီ မိမိတာဝန်ကို သဘောရိုးဖြင့် စွမ်းဆောင်နိုင်သမ ျှ ထမ်းဆောင်သော ” လို့ အစချီထားတာကိုလည်း သတိပြုမိတယ်။
နောက်ဆုံးတော့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က စခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းကို ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပဲ ပြန်အဆုံးသတ်ပေးရမှာပါ။